ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးကွန်ယက်ကို FIDULINK ၏ရှေ့နေအဖြစ်လုပ်ပါ
FIDULINK PARTNER LAWYER ဖြစ်လာသည်
မင်းရှေ့နေလား အတည်ပြုပြီးသားလား? သင်၏ဖောက်သည်သာမကသင်၏ကွန်ယက်တိုးပွားလာစေရန်အတွက်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကွန်ယက်တစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်လိုပါသလား။ မိတ်ဖက်များနှင့်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်မှုရှေ့နေများသည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နေရာကိုဖန်တီးပြီးတိုက်ရိုက်တောင်းဆိုမှုများကိုရရှိသည် FIDULINK.
၏ပေါ်တယ်အပေါ်ရှေ့နေမိတ်ဖက် join FIDULINK ဆိုလိုသည်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အကြံဥာဏ်များ၊ မစ်ရှင်များ၊ ကိုယ်စားပြုမှုများ၊ ကာကွယ်ရေးများမှပလက်ဖောင်းမှတိုက်ရိုက်တောင်းဆိုခြင်းကိုဆိုလိုသည် FIDULINK.
မိတ်ဖက်ဖြစ်ခြင်းသည်သင်အားအီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်း application မှတစ်ဆင့်သင်တောင်းဆိုချက်များကိုလက်ခံရရှိမည့်အရာများကိုသင်ကတိသစ္စာမပြုပါ။
ဒါကြောင့်ရှေ့နေဖြစ်လာ FIDULINK အနည်းငယ်ကလစ်အတွက်တောင်းဆိုမှုများကိုလက်ခံရရှိသည်။ ၅ မိနစ်အတွင်းအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ ၏ပtheိညာဉ်စာတမ်းအပေါ်လေ့ကျင့်ရေး FIDULINK , န်ဆောင်မှုများ, ကျွမ်းကျင်မှု FIDULINK ကမ်းလှမ်းသည် (ဤခြေလှမ်းပျမ်းမျှ 45 မိနစ်ကြာ) ။
လွတ်လပ်သောရှေ့နေများသို့မဟုတ်သင် FIDU သို့ဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်LINK
သင်၏နေရာမှသင်၏အမှုများကိုနှင့်ဖိုင်များကိုလိုက်နာပါ MY ရုံး သင်၏ရှေ့ဆောင်အဖြစ်တာ ၀ န်ယူမှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်အစစ်အမှန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှေ့နေလုပ်ပါ FIDULINK ဒါကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရား ၀ င်ဝန်ဆောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်တွင်တည်ရှိမှုနှင့်အတူပေါ်တယ် MY ရုံး ကမ္ဘာတစ်လွှားမှဖောက်သည်များလက်ခံရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းထားသည်။